Ikhanda elihle kakhulu labesilisa | Amadoda aSitayela
Ikilabhu lamaGentlemen | | Ukunakekelwa komuntu siqu, Indlela yokuphila, imfashini
Ambalwa kakhulu amadoda banakekela izinwele zabo njengoba kufanele futhi alinge Shintsha ukubukeka ngisho nokukama izinwele zakho ngendlela ehlukile futhi enesibindi. Iphutha elikhulu, ngoba libaluleke njengekhabethe lethu, amakha ethu noma izesekeli zethu isitayela sezinwele. A izinwele ezicwebezelayo, ethambile, e-silky nayo ingenza noma ubani athandane, ngakho-ke lungela ukuzama izitayela ezintsha bese usetha izitayela phakathi kwabangani bakho.
Isitayela sezinwele esibe semfashinini phakathi kobulili besilisa yi E-Eshiya, ilungele ukubukeka kwentsha. Kuyindlela elula futhi elula yokufeza isiphakamiso, esizofinyelela ngayo isitayela esijwayelekile nomoya wokuhlubuka. Icebo lokufeza lokhu ukukhombisa izinwele ngezendlalelo, lokhu kunjalo, kungcono ukuthi uzishiye ezandleni zomgundi wezinwele zakho. Ukuyihlanganisa, kufanele nje uyinike ivolumu ngeminwe yakho bese usebenzisa umkhiqizo ukuthola amandla amaningi nokuchaza amandla.
Enye indlela yekhanda ephumelele kakhulu kule sizini yiyo ebheja ngohlobo oluthile ukulele. Izinwele ezi-Lush, ama-bangs amade aphakanyisiwe kancane futhi ahlukana ohlangothini olulodwa. Osaziwayo nabadlali bebhola lezinyawo bazi okuningi ngokusetha izitayela, kepha buza uDavid Beckham, owenza leyokhanda engathandabuzeki ukuthi ibe semfashinini.
Lapho ukhetha isitayela sezinwele kufanele ucabangele izici zakho, nokumila kobuso, ngoba indoda ngayinye ithanda enye yezinwele ngaphezu kwenye. Uma unobuso obuyindilinga noma obuyisikwele, ungagqoka cishe noma yisiphi isitayela sezinwele, kuyilapho uma unobuso obude, kungcono ukuya ngesitayela se-tousled noma se-wavy.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ikhanda elihle kakhulu labesilisa
I-Lotus neqoqo lakhe lezingubo